Ndeupi Mhando yekutenga muna 2022? Nhungamiro yekusarudza modhi yaunoda | Gadget nhau
Maitiro ekutenga iyo Kindle
Ignatius Room | | Amazon, vaverengi
Kwechinguva ikozvino, mabhuku emagetsi ave nzira yakanyanya kushandiswa yekuverenga mabhuku edu atinofarira, kunyangwe ari enhau kana echinyakare. Chikonzero chikuru ndechekuti kunyaradzwa kwazvinotipa isu vaviri kana tichiverenga uye kana tichizvitenga.
Mumusika watinawo nhamba huru yemidziyo yekuverenga mabhuku emagetsi, anonzi e-reader, zvisinei, mugadziri ari kuunza zvigadzirwa zvakanaka kumusika gore rega rega ndiAmazon, piyona munyika yemabhuku emagetsi. Kana iwe usina chokwadi kuti ndeupi muenzaniso wakanyatsokodzera zvaunoda, saka tinokuratidza sei kutenga Kindle.
Parizvino, iyo Kindle renji ine zvina zvigadzirwa. Mune iyi nhanho isu hatifungi nezveMoto renji, iwo mahwendefa zvakare anobva kuAmazon atinogona zvakare kuverenga mabhuku emagetsi, kunyange hazvo risiri iro donzvo raro guru, kunyangwe Tichataurawo nezvazvo nekutenda kune kwakawanda kwayinotipa.
Matipi mashanu anonakidza ekuti uwane zvakazara kubva kuMhando yako
Sezvo makore apfuura, Amazon yaenda kuwedzera huwandu hwemabhuku emagetsi akaitwa kuti tiwanikwe, uye parizvino tinogona kuwana kubva kune ekutanga mamodheru senge 2016 Kindle kune iyo Kindle Oasis, modhi inofarira tekinoroji yazvino mune iyi mhando yechigadzirwa
2 Kindle (2016) 8th chizvarwa
5 Kufananidza kweMhando e-kuverenga
6 Anopfuura miriyoni emabhuku atinogona: Kindle Unlimited
7 Kindle Moto wezvese zvimwe
El nyowani nyowani, iyo inosvika pamusika kutsiva yechizvarwa chechisere 2016 modhi inosanganisa mwenje wepamberi unogadziriswa, chimwe chinhu icho chizvarwa chekare chisipo, uye icho chinotibvumidza kuverenga kwatinoda uye patinoda pasina zvichienderana nemwenje wepakati unotikomberedza. Iyo yakagadzirirwa kuverenga neakakwira musiyano wekubata skrini yakafanana chaizvo nemapepa akadhindwa uye semamodeli ese haaratidze chero kuratidzwa.
Iyo skrini ndeye 6 inches, ine 4 GB yekuchengetera kwemukati, ine zviyero zve160x113x8,7 mm uye huremu hwemagiramu e174, iyo inotibvumidza kuti tibate neruoko rumwe. Mutengo wacho ndeye 89,99 euros uye inowanikwawo mune chena uye nhema.
Kindle (2016) 8th chizvarwa
Mhando inotipa iyo 6-inch screen isina yakasanganiswa mwenje, saka sosi yechiedza inofanirwa kuishandisa. Iyo skrini, senge mazhinji emidziyo iyi, haina kuneta kutarisa, inobata uye hairatidze chero mhando yekuratidzira kunyangwe pasi pezuva. Zvichienderana nekushandisa kwatinoita, bhatiri rinogona kugara vhiki dzinoverengeka pachinhu chimwe chete.
Mune Kindle (2016) modhi inowanikwa mune nhema uye chena mavara kwema 69,99 euros chete, uye ndicho chinhu chakanakisa chaungawana mune ino nharaunda kuti uongorore zvakanakira izvo mabhuku emagetsi anotipa, kana usati uine chokwadi chekuti inogona kunge iri nzira yako nyowani yekushandisa zvemukati.
Tenga Kindle (2016)
Iyo Kindle Paperwhite ndeyeAmazon thinnest uye akareruka e-kuverenga izvo. Uye zvakare, ine skrini iyo inopa resolution ye300 pp uye, semamodeli ese, hairatidzi chero sosi yechiedza. Iyo yekuchengetera nzvimbo yakave zvakare yakawedzerwa ichienzaniswa neyekare chizvarwa (8 uye 32 GB) uye nemubhadharo mumwe chete tine kuzvitonga kwemavhiki.
Imwe yemabhaisikopo makuru ayo aanotipa tichienzanisa neyekare mamodheru ndiko kuramba kwemvura, saka tinogona ishandise zvakanaka mubhavhu, mudziva kana pamhenderekedzo yegungwa nekuda kweiyo IPX68 dziviriro. Iyo skrini inotipa mwenje wayo wega, yakanakira kushandiswa mune chero ambient mwenje mamiriro.
Mutengo weiyo Kindle Paperwhite ine 8 GB yekuchengetedza pamwe neWi-Fi kubatana ndeye 129,99 euros, nepo iyo 32 GB vhezheni ichikwira kusvika ku159,99 euros. Isu zvakare tine yedu 32 GB vhezheni yemahara 4G ye229,99 euros.
El Kindle Oasis Iko kusvika ikozvino Amazon e-reader ine hukuru hukuru hwekrini, 7 inches chaiyo. Iyo skrini resolution inosvika 300 dpi iyo inopa kwakanyanya kupinza uye zvakare inobvumidza ratidza makumi matatu% mamwe mazwi papeji rimwe chete.
Kunge Kindle Paperwhite, haina mvura nekuda kwekudzivirirwa kweIPX68, iyo skrini hairatidze chero kuratidza uye ine mwenje wayo wega kuti uverenge zvakakwana murima usinganete maziso ako. Uyu ndiwo muenzaniso uyo inotipa madiki madiki, kunze kwekurudyi kwescreen, panoratidzwa furemu hombe yekugona kuishandisa neruoko rumwe.
Mutengo weiyo Kindle Oasis ye8 GB yekuchengetedza pamwe neWi-Fi kubatana ndeye 249,99 euros, nepo iyo 32 GB vhezheni ichikwira kusvika ku279,99 euros. Isu zvakare tine yedu 32 GB vhezheni yemahara 4G ye339,99 euros.
Kufananidza kweMhando e-kuverenga
Muenzaniso Nyowani Nyowani Kindle Paperwhite Kindle Oasis
Mutengo Kubva kuEUR 89.99 Kubva kuEUR 129.99 Kubva kuEUR 249.99
Screen size 6 "isina fungidziro 6 "isina fungidziro 7 "isina fungidziro
Capacity 4 GB 8 kana 32 GB 8 kana 32 GB
Kugadzirisa 167 ppp 300 ppp 300 ppp
Chiedza chemberi 4 akatungamirira 5 akatungamirira 12 akatungamirira
Mavhiki ekuzvimirira Si Si Si
Borderless yekumberi dhizaini Aihwa Si Si
IPX8 kushorwa kwemvura Aihwa Si Si
Sensor yekugadzirisa otomatiki mwenje Aihwa Aihwa Si
Peji dzoka mabhatani Aihwa Aihwa Si
Wifi kubatana Wifi Wifi kana wifi + yemahara yekubatanidza nhare Wifi kana wifi + yemahara yekubatanidza nhare
Weight 174 gramu Wifi: 182 gramu - wifi + 4G LTE: 191 gramu Wifi: 194 gramu; wifi + 3G: 194 magiramu
Vipimo X X 160 113 8.7 mamirimita X X 167 116 8.2 mamirimita 159 x 141 x 3.4 - 8.3 mm
Anopfuura miriyoni emabhuku atinogona: Kindle Unlimited
Amazon haisati yambozivikanwa nekuyedza kuita mari nemidziyo yayo. Muzviitiko zvakawanda, inotengesa zvigadzirwa zvemagetsi nemutengo nekuti zvazviri kuda kuchengetedza mushandisi uye izvo, mune ino kesi, tenga mabhuku acho zvakananga papuratifomu yako.
Kindle Unlimited, inoisa kwatinogona kuwana anopfuura miriyoni yemabhuku mukutsinhana nemubhadharo wemwedzi wega we9,99 euros, mabhuku atinogona. Uye zvakare, kana isu tiri vashandisi vePrime, isu tine yedu diki katarogi yemabhuku, asi zvachose pasina muripo kuburikidza nekuverenga kukuru.
Kindle Moto wezvese zvimwe
8, Kindle Moto
Mhuri yeMhando yeMoto parizvino yakaumbwa nemaviri 7-inch uye 8-inch mamodheru. Izvo zvakagadzirirwa kudya zvemultimedia zvemukati kuburikidza neAmazon Prime Vhidhiyo, Amazon yekumhanyisa vhidhiyo sevhisi, kunyangwe isu tichigonawo kuishandisa ku svetesa internet, bvunza masocial network uyezve kuti uverenge mabhuku edu atinofarira.
Mabhenefiti acho akanaka, saka hatigone kuzvitenga nemapiritsi ekumusoro-soro ayo isu neApple tinotipa. Mutengo wayo weiyo 7-inch vhezheni ndeye 69,99 euros yeiyo 8 GB vhezheni uye 79,99 euros yeiyo 16 GB vhezheni. Iyo vhezheni ine yakakura saizi saizi, iyo 8-inch modhi, inotengwa pamamiriyoni 99,99 euros yeiyo 16 GB vhezheni uye 119,99 euros yeiyo 32 GB vhezheni.
Tenga 7-inch Kiundle Moto Tenga 8-inch Kindle Moto HD
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Amazon » Maitiro ekutenga iyo Kindle
Conga 3090 yekuchenesa inoongorora
Amazon Kindle ine yakasangana mwenje, zvaiita kunge zvisingaite kugadzirisa iyo Kindle [HWEDZISO]